Wariyayaal Iswiidhish oo maxkamad lagu saarayo dalka Itoobiya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wariyayaasha Iswiidhishka ah ee maxkamadda lagu saarayo dalka Itoobiya.
Wariyayaal Iswiidhish oo maxkamad lagu saarayo dalka Itoobiya
La cusbooneeyay onsdag 17 augusti 2011 kl 16.30
La daabacay onsdag 17 augusti 2011 kl 15.30
Maanta ayaa dalka Itoobiya waxaa maxkamad la horkeeney laba suxufi oo u dhashey dalkaan Iswiidhan.
Labadaan wariye oo lagu kala magacaabo Johan Persson iyo Martin Schibbye ayaa waxaa horaantii bishii luulyo lagu qabtey xuduudka gobolka Ogaadeenya oo ay soomaalidu dagto, waxayna laga soo bilaabo mudadaas ay ku xirnaayeen dalka Itoobiya.
Booliiska dalka Itoobiya ayaa maxkamadii maanta la horkeeney labadaas wariye, wuxuu ka dalbadey in muddo 28 casho ah xabsiga lagu sii hayo labadaas wariye ,sidaasna waxaa sheegey André Mkandawire oo dhanka warfaafinta u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Iswiidhan.
Ururka wariyayaasha aan xuduudla laheeyn ayaa wariyayaashaas u uruuriyey lacag dhan 95 000 oo karoon taas oo la rabo in wariyayaashaas Iswiidhishka ah looga caawiyo dhinaca sharciga.
Wariyayaashaan oo gobolkaas u tagey in ay warbixino ka soo duubaan ayaa hadda waxay ku wada xiran yihiin hal qol,wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Iswiidhanna waxay sheegtey in xaaladda caafimaad ee wariyayaashaasi ay tahay mid fiican .